Mma Wo ‘Koma Nhuru Nhyɛ Yehowa’ Da | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Mixe Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Ɔdesani nkwaseasɛm na ɛkyea ne kwan, na ne koma huru hyɛ Yehowa.”—MMEB. 19:3.
Dɛn na ebetumi ama yɛn ‘koma ahuru ahyɛ Yehowa’?
Nneɛma anum bɛn na ɛbɛboa yɛn na yɛn koma anhuru anhyɛ Onyankopɔn?
Sɛ yɛkɔ amanehunu mu a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
1, 2. Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛka sɛ Yehowa ne adesamma haw farebae? Ma mfatoho.
FA NO sɛ woaware mfe pii, na wo ne wo yere te hɔ fɛfɛɛfɛ. Nanso da koro a wufi abɔnten baa fie no, wubehui sɛ biribiara adan abutuw. Nkongua ne apon nyinaa abubu, mprɛte a ɛwɔ hɔ nyinaa abobɔ, kapɛt no nso atete asɛe. Efie a wunni ho agorɔ na emu nneɛma nyinaa atete apansam yi! Dɛn na wobɛyɛ? Wo koko bɛpae ma woaka sɛ, “Adɛn nti na me yere yɛɛ saa?” Anaa wubebisa sɛ, “Hena na ɔyɛɛ saa ade yi?” Woremfa nhyɛ wo yere da, efisɛ wunim sɛ wo dɔfo no renni saa nyamrasɛm no.
2 Ɛnnɛ yehu sɛ efĩ, awurukasɛm ne ɔbrasɛe atu atese wɔ asase so baabiara. Bible a yɛasua nti, yɛnna nnwen ho da koro mpo sɛ Yehowa ne ɔhaw yi farebae. Yenim sɛ ɔbɔɔ asase yi sɛ anka ɛnyɛ paradise fɛfɛɛfɛ. (Gen. 2:8, 15) Yehowa ne ɔdɔ Nyankopɔn. (1 Yoh. 4:8) Kyerɛwnsɛm no ama yɛahu wiase haw dodow no ara farebae. Ɛnyɛ obiara sɛ Satan Bonsam; ɔno ne “wiase sodifo.”—Yoh. 14:30; 2 Kor. 4:4.
3. Dɛn na ebetumi ama yɛn nsusuwii akyea?
3 Nanso ɛnyɛ yɛn haw nyinaa na efi Satan. Adɛn ntia? Efisɛ yɛn ankasa mfomso ka ho bi na yehu amane. (Monkenkan Deuteronomium 32:4-6.) Yenim nokwasɛm yi, nanso ɛtɔ da a yɛn sintɔ nti yentumi nsusuw nsɛm ho yiye, enti ebewie ase no na yɛreyɛ biribi a ɛyɛ hu paa. (Mmeb. 14:12) Ɔkwan bɛn so? Sɛ yehyia ɔhaw a, ebia yɛn werɛ befi sɛ efi Satan anaa yɛn ankasa, enti wobɛhwɛ na yɛrebɔ Yehowa sobo. Yɛanhwɛ yiye a yɛn ‘koma behuru ahyɛ Yehowa’ mpo.—Mmeb. 19:3.
4, 5. Ɛbɛyɛ dɛn na Kristoni ‘koma ahuru ahyɛ Yehowa’?
4 Enti ampa ara sɛ yɛn ‘koma betumi ahuru ahyɛ Yehowa’? Sɛ obi yɛ saa a, na ɔno ara na ɔrehaw ne ho. (Yes. 41:11) Hena na obetumi ne Onyankopɔn adi asi? Anwensɛm kyerɛwfo bi kae sɛ: “Wo nsa nnu baabiara na woato Onyankopɔn twɛdeɛ.” Ebia yɛremmue yɛn ano nkasa ntia Yehowa da. Nanso Mmebusɛm 19:3 ka sɛ: “Ɔdesani nkwaseasɛm na ɛkyea ne kwan, na ne koma huru hyɛ Yehowa.” Enti obi bo betumi afuw Onyankopɔn wɔ ne komam. Yebetumi ayɛ saa mpo a yenhu. Enti sɛ yɛreka a, obi betumi ne Yehowa atwe anaa obenya ne ho menasepɔw. Ɛba saa a, ebia obegyae asafo no anaa ɔrentene ne ho nsom Yehowa yiye.
5 Dɛn na ebetumi ama yɛn ‘koma ahuru ahyɛ Yehowa’? Yɛbɛyɛ dɛn akwati biribi a ɛte saa? Ehia sɛ yenya nsɛmmisa yi ho mmuae. Efisɛ, sɛ yɛn koma huru hyɛ Yehowa a, ebetumi asɛe yɛne ne ntam.
DƐN NA EBETUMI AMA YƐN KOMA ‘AHURU AHYƐ YEHOWA’?
6, 7. Adɛn nti na Israelfo nwiinwii tiaa Yehowa wɔ Mose bere so?
6 Dɛn na ebetumi ama Yehowa somfo nokwafo anwiinwii atia Onyankopɔn? Yɛbɛhwɛ nneɛma anum a ebetumi ama obi ‘koma ahuru ahyɛ Yehowa’ na yɛasusuw Bible mu nhwɛso ahorow bi ho ahwɛ nea ɛtoo ebinom tete mmere mu.—1 Kor. 10:11, 12.
Nkurɔfo nsɛnkeka betumi asɛe wo gyidi (Hwɛ nkyekyɛm 7)
7 Nkurɔfo nsɛnkeka betumi asɛe yɛn gyidi. (Monkenkan Deuteronomium 1:26-28.) Afei ara na na wɔagye Israelfo afi Egypt nkoasom mu. Na Yehowa nam anwonwakwan so de ɔhaw du aba ɔman atirimɔdenfo no so, na ɛno akyi ɔsɛee Farao ne n’asraafodɔm wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no mu. (Ex. 12:29-32, 51; 14:29-31; Dw. 136:15) Na Onyankopɔn nkurɔfo ayɛ krado sɛ wɔbɛkɔ Bɔhyɛ Asase no so. Nanso saa bere no ara na Israelfo fii ase nwiinwii tiaa Yehowa. Dɛn na ɛsɛee wɔn gyidi? Mose somaa nnipa bi sɛ wɔnkɔhwɛ Bɔhyɛ Asase no, na bere a wɔbae no amanneɛbɔ a wɔn mu bi de bae no maa Israelfo no koma tui. (Num. 14:1-4) Dɛn na efii mu bae? Saa awo ntoatoaso no annya kwan ankɔ “asase pa” no so. (Deut. 1:34, 35) Dɛn na yesua fi mu? Sɛ yɛanhwɛ yiye a, yɛn nso nkurɔfo nsɛnkeka betumi asɛe yɛn gyidi na yɛanwiinwii atia Yehowa na yɛakasakasa n’akwankyerɛ ho.
8. Dɛn na ɛmaa Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ Yesaia bere so de wɔn anibere kɔsoɛɛ Yehowa so?
8 Ahohia ne Amanehunu betumi abu yɛn abam. (Monkenkan Yesaia 8:21, 22.) Yuda man no kɔɔ ahohia mu wɔ Yesaia bere so. Saa bere no, na atamfo atwa wɔn ho ahyia. Na aduan akɔ atwee ma ɔkɔm adosaw nnipa pii. Nea ɛsɛee asɛm no koraa ne sɛ na Yehowa asɛm ho ayɛ na ma honhom fam kɔm rekum wɔn. (Amos 8:11) Anka ɛsɛ sɛ ɔman no su frɛ Yehowa na ɔboa wɔn, nanso wɔanyɛ saa. Mmom wofii ase ‘domee’ wɔn hene ne wɔn Nyankopɔn mpo. Wo ara hwɛ, Yehowa mmom na wɔde wɔn anibere akɔsoɛ no so. Sɛ asɛm to yɛn anaa yɛkɔ ahohia mu a, anhwɛ a yɛbɛka wɔ yɛn komam sɛ, ‘Enti na Yehowa wɔ he?’
9. Adɛn nti na Israelfo a wɔwɔ Hesekiel bere so nyaa adwene a ɛnteɛ?
9 Yennim asɛm no mu nyinaa. Na Israelfo a wɔwɔ Hesekiel bere so nnim Yehowa akwan yiye, enti wɔkae sɛ ‘n’akwan nteɛ.’ (Hes. 18:29) Na wɔakɔyɛ wɔn ho te sɛ atemmufo a wɔredi Onyankopɔn asɛm. Yɛbɛka a, na susudua a wɔn ankasa ayɛ na wɔde redi Yehowa asɛm. Na wɔnte nneɛma ase nwie, nanso kakra a wonim no, na wɔpɛ sɛ wɔde bu Yehowa atɛn. Sɛ yɛnte Bible mu asɛm bi ase anaa biribi si yɛn asetenam na yɛnte ase yiye a, anhwɛ a yɛbɛka wɔ yɛn komam sɛ Yehowa ne yɛn anni no yiye anaa yebesusuw sɛ ‘n’akwan nteɛ.’—Hiob 35:2.
10. Dɛn na obi yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔredi ɛsa bɔne a Adam twae no akyi?
10 Ebia yɛbɛprɛ yɛn bɔne anaa yɛn mfomso ato afoforo so. Adesamma ahyɛase pɛɛ na Adam prɛɛ ne bɔne too Onyankopɔn so. (Gen. 3:12) Na Adam nim sɛ, sɛ obu Onyankopɔn mmara so a, obetwa so aba nanso ɔboapa buu so. Owiei na otwaa ne ho prɛ too Yehowa so. Nea na ɔrepɛ akyerɛ ara ne sɛ Yehowa ama no ɔbea bɔne. Ɛsa bɔne a Adam twa too hɔ no na ebinom di akyiri; wodi mfomso a na wɔaprɛ ato Onyankopɔn so. Enti ɛsɛ sɛ yebisa sɛ, ‘Midi mfomso na egyaw me tipae anaa abasamtu a, meka sɛ Yehowa mmara yɛ den dodo?’
11. Dɛn na yebetumi asua afi Yona hɔ?
11 Anhwɛ a yebedwen yɛn ho dodo. Bere a Yehowa huu Niniwefo mmɔbɔ na ɔtwee ɔsɛe a anka ɔde reba wɔn so sanee no, anyɛ odiyifo Yona dɛ koraa. (Yona 4:1-3) Adɛn ntia? Ɛbɛyɛ sɛ bere a Yona kaa ɔsɛe no ho asɛm a amma no, ɔtee nka sɛ n’anim agu ase. Na Niniwefo no anu wɔn ho, nanso na nea ehia Yona ne sɛ n’anim bɛba nyam sen sɛ obehu Niniwefo no mmɔbɔ. Anhwɛ a yɛn nso yebedwen yɛn ho dodo ma yɛn koma ahuru ahyɛ Yehowa sɛ awiei no mmaa ntɛm. Ebia yɛde mfe pii abɔ no dawuru akyerɛ nkurɔfo sɛ Yehowa da no abɛn. Eyi yɛ Bible mu asɛm, nanso sɛ nkurɔfo di yɛn ho fɛw a, ebia yɛde yɛn anibere bɛsoɛ Yehowa so.—2 Pet. 3:3, 4, 9.
DƐN NA YƐBƐYƐ NA YƐN ‘KOMA ANHURU ANHYƐ YEHOWA’?
12, 13. Sɛ yehu sɛ ɔkwan bi so no yɛrenwiinwii tia Yehowa wɔ yɛn komam a, dɛn na yɛbɛyɛ?
12 Sɛ yehu sɛ ɔkwan bi so no yɛrenwiinwii tia Yehowa wɔ yɛn komam a, dɛn na yɛbɛyɛ? Kae sɛ nyansa nnim sɛ yɛbɛyɛ saa. Bible bi kyerɛ Mmebusɛm 19:3 ase sɛ: “Onipa a nimdeɛ abɔ no sɛe n’akwan, na ɔde n’anibere kɔsoɛ Yehowa so.” (Byington) Afei momma yɛnhwɛ nneɛma anum a ɛbɛboa yɛn na yɛamfa yɛn anibere ankɔsoɛ Yehowa so.
13 Mmu Yehowa adamfofa adewa. Sɛ yɛne Onyankopɔn fa adamfo a, ɛbɛboa yɛn na yɛn bo anhuru anhyɛ no. (Monkenkan Mmebusɛm 3:5, 6.) Ehia sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so. Afei nso ɛnsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ani so anyansafo anaa yedwen yɛn ho dodo. (Mmeb. 3:7; Ɔsɛnk. 7:16) Sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so a, ɛnde sɛ ɛba sɛ yehyia ɔhaw bi mpo a, yɛremfa yɛn anibere nkɔsoɛ no so.
14, 15. Dɛn na ɛbɛboa yɛn na nkurɔfo nsɛnkeka ansɛe yɛn gyidi?
14 Mma nkurɔfo nsɛnkeka nsɛe wo gyidi. Na Israelfo a wɔwɔ Mose bere so no nim paa sɛ Yehowa betumi de wɔn akodu Bɔhyɛ Asase no so dwoodwoo. (Dw. 78:43-53) Nanso amanneɛbɔ a mmarima du no de bae no tuu wɔn koma na ‘wɔankae Yehowa nsa.’ (Dw. 78:42) Sɛ yedwinnwen Yehowa nnwuma ho na yɛkae nneɛma pa a wayɛ ama yɛn a, yɛde yɛn ho bɛfam ne ho denneennen. Ɛba saa a, yɛremma nkurɔfo nsɛnkeka ntoto yɛne Yehowa ntam da.—Dw. 77:11, 12.
15 Sɛ yenya yɛn nuanom Kristofo ho adwemmɔne nso ɛ? Ɛno nso betumi asɛe yɛne Yehowa ntam. (1 Yoh. 4:20) Bere a Yehowa paw Aaron sɛ ɔsɔfo panyin no, Israelfo nwiinwii. Yehowa faa no sɛ ɔno mmom na wɔrenwiinwii tia no. (Num. 17:10) Ɛnnɛ nso Yehowa nam ebinom so rekyerɛ n’ahyehyɛde no fã a ɛwɔ asase so no kwan. Enti sɛ yenwiinwii tia wɔn a, ɛkyerɛ sɛ Yehowa na yɛrenwiinwii atia no.—Heb. 13:7, 17.
16, 17. Sɛ yehyia ɔhaw a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
16 Kae sɛ ɛnyɛ Yehowa na ɔma yehu amane. Yesaia bere so no, na Israelfo aman afi Yehowa ho, nanso wanto wɔn asaworam. (Yes. 1:16-19) Enti ɔhaw biara a yebehyia no, ɛsɛ sɛ yenya awerɛhyem sɛ Yehowa dwen yɛn ho na wayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛn. (1 Pet. 5:7) Wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛma yɛn ahoɔden de egyina tebea no ano.—1 Kor. 10:13.
17 Sɛ obi sisi yɛn anaa obu asɛm gu yɛn so sɛnea ɛtoo ɔnokwafo Hiob no a, ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ emfi Yehowa. Yehowa kyi nsisi ne atɛnkyea; ɔdɔ trenee. (Dw. 33:5) Ɛsɛ sɛ yenya adwene a Hiob adamfo Elihu nyae no bi. Ɔkae sɛ: “Ɛmpare nokware Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ne ade nyinaa so Tumfoɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɛnteɛ!” (Hiob 34:10) Ɛnyɛ Yehowa na ɔma yehu amane. Nokwasɛm ne sɛ Bible ka sɛ “akyɛde pa ne adekyɛde a ɛyɛ pɛ biara” fi ne hɔ.—Yak. 1:13, 17.
18, 19. Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yesusuw bɔne ma Yehowa da? Ma mfatoho.
18 Nsusuw bɔne mma Yehowa. Onyankopɔn yɛ pɛ na n’adwene korɔn sen yɛn adwene. (Yes. 55:8, 9) Enti ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase na yegye tom sɛ yɛn adwene sua. (Rom. 9:20) Ɛsɛ sɛ yehu sɛ ɛnyɛ asɛm biara na yebetumi ahu mu nokwasɛm nyinaa. Ebia woahu sɛ abebusɛm yi yɛ nokware: “Nea odi kan bɔ ne nkuro yɛ ɔtreneeni, na ne yɔnko ba a, ɔbɛhwehwɛ ne mu.”—Mmeb. 18:17.
19 Fa no sɛ wo yɔnko berɛbo bi ayɛ biribi, na wudwen ho a ɛnsen wo tirim. Ɛba saa a, wobɛpere wo ho aka sɛ wanyɛ no yiye na woasusuw bɔne ama no? Anaa nea ɛbɛba wo tirim ntɛm ne sɛ w’adamfo no ntumi nyɛ wo bɔne, ɛnkanka sɛ wo ne no abɔ akyɛ a? Yɛn adamfo a ɔnyɛ pɛ mpo, sɛ yɛremfa bɔne nsusuw no a, yɛn soro Agya a n’akwan ne n’adwene korɔn sen yɛn na yɛde bɔne besusuw no?
20, 21. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yehu baabi a ɔhaw no fi?
20 Hu baabi a ɔhaw no fi. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yehu baabi a ɔhaw no fi? Asɛm no ne sɛ ɛtɔ da bi a na ɔhaw no fi yɛn ankasa. Sɛ saa na ɛte a, ɛnde ɛsɛ sɛ yegye tom. (Gal. 6:7) Ɛnsɛ sɛ yɛde hyɛ Yehowa. Adɛn nti na nyansa nnim sɛ yɛde bɛhyɛ no? Ma yɛnyɛ mfatoho bi. Yɛmfa no sɛ drɔbani bi reka kar a eguan paa, na bere a oduu kɔɔf bi so no, wanto ne bo ase ɛnna onyaa akwanhyia. Wohwɛ a ɛsɛ sɛ ɔka sɛ nea ɔyɛɛ kar no na wama asɛm ato no? Dabida! Yɛn nso Yehowa ama yɛn hokwan a yɛn ankasa de besi gyinae a yɛpɛ. Nanso wakyerɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so asisi gyinae pa. Enti sɛ yedi mfomso a, adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde kɔto yɛn Bɔfo no so?
21 Nea yɛreka yi nkyerɛ sɛ yɛn haw nyinaa fi yɛn ankasa mfomso. Bible ma yehu biribi foforo a ɛma yehu amane. Ɛka sɛ ‘asiane to yɛn nyinaa bere a yɛnhwɛ kwan.’ (Ɔsɛnk. 9:11) Nanso ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi da sɛ Satan Bonsam ne bɔne nyinaa kɔfabae. (1 Yoh. 5:19; Adi. 12:9) Ɔno ne yɛn tamfo, na ɛnyɛ Yehowa!—1 Pet. 5:8.
FA WO HO FAM YEHOWA HO DENNEENNEN
Yosua ne Kaleb nyaa Yehowa mu gyidi na ohyiraa wɔn (Hwɛ nkyekyɛm 22)
22, 23. Sɛ asetenam dadwen ama yɛn abam abu a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
22 Sɛ wokɔ ahohia anaa amanehunu mu a, kae Yosua ne Kaleb nhwɛso no. Bere a mmarima du no bɛsɛee Israelfo no adwene no, Yosua ne Kaleb de amanneɛbɔ pa bae. (Num. 14:6-9) Wonyaa Yehowa mu gyidi, nanso wɔne Israelfo a aka no wɔɔ ntwɛtwɛdɛ sare no so mfe 40. Yosua ne Kaleb bo fuwii anaa wonwiinwii kae sɛ Yehowa ne wɔn anni no yiye anaa? Dabida. Na wɔwɔ awerɛhyem sɛ Yehowa akwan na eye. Yehowa hyiraa wɔn anaa? Ohyiraa wɔn papaapa! Bere a awo ntoatoaso bɔne no nyinaa wuwui no, wɔn de, wonyaa wɔn ti didii mu kɔɔ Bɔhyɛ Asase no so. (Num. 14:30) Yɛn nso sɛ “yɛampa abaw” a, yebenya Yehowa nhyira.—Gal. 6:9; Heb. 6:10.
23 Sɛ asetenam dadwen anaa afoforo sintɔ anaa wo ara wo sintɔ ama w’abam abu a, dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Dwinnwen Yehowa su a ɛyɛ fɛ no ho. Afei wowɔ hɔ a, twa nneɛma a Yehowa de ahyɛ wo bɔ no ho mfonini. Bisa wo ho sɛ, ‘Sɛ ɛnyɛ Yehowa a, anka m’abrabɔ awie me sɛn?’ Ɛnde, kɔ so fa wo ho fam Yehowa ho denneennen, na mma wo koma nhuru nhyɛ no da!